Hery Rajaonarimampianina In-16 nivoaka tany ivelany
Marc Ravalomanana Efa voasedra ary tsy mitsoaka ady
Efa niomana sy nivonona handray fitondrana ny TIM. Tsy atao kitaitaitra io fa mila paikady tsara petrapetraka. Mila rafitra mafy mahenika ny Nosy ny fahazoana fandresena, ary tsikaritra ho efa niomana ho amin’izany satria saika mihetsika avokoa ny rehetra amin’izao fotoana ary fifaninanana masina ny an’ny TIM samy TIM amin’io fifidianana io amin’ny fahazoana isam-bato betsaka indrindra hampandaniana an’i Marc Ravalomanana. Maro sy be rahateo ny fampianarana sy fiofanana natao.
Saraha Rabeharisoa Hametraka ny repoblika parlemantera
Raha ny vina politikan` ny antoko PLD (Paika sy Lamina ho an`ny Daholobe) dia hametraka repoblika parlemantera eto Madagasikara satria ny fahefana dia miainga avy amin`ny vahoaka.
Omer Beriziky Hampisafidy rafi-panjakana roa
Nahavita sy nametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina ho filoham-pirenena ny praiministra teo aloha, Omer Beriziky, omaly teny amin`ny HCC. Tsy mbola feno ny fepetra rehetra hanatanterahana fifidianana madio, malalaka, izay heken`ny besinimaro ny vokany.
Jean Jacques Ratsietison Hamaha olan’ny firenena amin’ny didim-pitondrana
Kandida faha-10 tonga nanatitra ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiany ho filoham-pirenena tetsy amin’ny HCC Ambohidahy ny talata teo ny natolotry ny antoko politika Fahefa-Mividy izao no Ilain’ny Malagasy (FMI Ma), Jean Jacques Ratsietison.
Richard Razafy Rakotofiringa Kandidà nijaikojaiko teny amin`ny HCC
Hatairana ny an`ny mpanao gazety tonga teny amin`ny HCC omaly raha nahita fiara iray nitondra olona milaza fa hametraka antontan-taratasy maha kandidà azy taorianakelin’ny fahalasan`ny kandidà iray vao avy nanatitra izany.
Solo Norbert Andriamorasata Kandidan’ny hery ankavia
Iray amin’ireo hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenana ny mpanao gazety zokiolona Solo Norbert Andriamorasata, izay sokajiana ho zokiny indrindra amin’ireo kandida satria efa 82 taona izy amin’izao fotoana izao.
Tahan`ny mpifidy Mihena isaky ny fifidianana, hoy ny CENI
Mitohy hatrany ny fampiofanana entin`ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) mba hanatsarana hatrany ny fanomanan`i Madagasikara ny fiatrehana fifidianana atao amin`ity taona ity.
Nateti-pivoaka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ity taona 2017 hivalona afaka dimy andro ity.
Rariny izany hoy ny manodidina azy, satria filoha am-perinasa mitarika ny vondrona Frankôfônia izy, toy izany koa ny vondrom-pifanakalozana COMESA. In-16 tany ivelany ny filoha Rajaonarimampianina, izany hoe nihoatra ny in-dray mandeha isam-bolana ny diany tany ivelany. In’efatra isaky ny telo volana. Namonjena fivoriana mahazatra, toy ny an’ny Firenena Mikambana, Vondrona Afrikana, Franôfônia... ny fivoahana sasany, ny hafa valin’ny fanasana nanatontosana fitsidiham-panjakana, toy ny tany Alemaina, Chine, Italia, Japon... Fa nisy koa ny dia manokana, tsy mba nahazoana akony sy tatitra ho an’ny vahoaka. Herinandro teo ny faharetan’ny dian’ny filoha tamin’ny ankapobeny isaky ny miainga, izany hoe manodidina ny 100 andro tany ivelany tany ny filoha Rajaonarimampianina. Laniny tany ny ampahatelon’ny fotoanany tamin’ity 2017 ity ary olona an-jatony no niaraka taminy tao anatin’izany diany rehetra izany. Vola ana miliara Ariary no fandaniana naterany, izay ny vahoaka Malagasy no mibaby azy. Inona no vokatra nentin’ny dia rehetra natao tany ivelany tany izay hataka no betsaka ? Fa raha ny zava-misy eto an-toerana, dia tsy mitsaha-mitotongana ny vola malagasy Ariary, tsy mitsaha-miakatra ny vidin-tsolika, ary dia manaraka izay koa ny vidim-piainana. Tsy mbola nisy teto amin’ity firenena ity ny vidim-bary 1200 Ariary ny iray kapoakan’ny fotsimbary, 700-800Ar teto an-drenivohitra, raha tsy tamin’izao fitondrana izao. Dia mbola hisy mpitondra hibitaka sy hirehareha ve manoloana izany fa nikatsaka izay hahasoa ny Malagasy no nivoahana im-polo kely tany ivelany tany ?